China Wanda Mini Excavator စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Wanda
Mini Excavator အတွက် အတွင်းသွားများပါရှိသော အရည်အသွေးမြင့် Slewing Bearing
light type slewing ring bearing သည် လေးချက်ပွိုင့်အဆက်အသွယ်ဘောလုံး slewing ring bearing နှင့်တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော်လည်းအလေးချိန်သည်ပေါ့ပါးပြီးအချို့သော light type machinery applications များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
light slewing bearing ring ကို များစွာသော applications များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည် ။
ကုန်ထုတ်စက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား ပြုပြင်ရေးဆိုင်များ
Four Point ဆက်သွယ်ရန်
Single Row လေးပွိုင့်ဘောလုံးအမျိုးအစား
Slewing ring, slewing bearing, slew စက်ဝိုင်း
OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု
1.ကျွန်ုပ်တို့သည် 18 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော slewing bearing နှင့် slewing drive များထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
2.ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဧရိယာ 20000 စတုရန်းမီတာကျော်ရှိသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင် 4m CNC Raceway Quenching Machine၊CNC integral tooth quenching machine၊Gear ကဲ့သို့သော အစုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစက် 90 ကျော်ရှိသည်။
ကြိတ်စက်၊5မီတာ ဒေါင်လိုက် Lathe စသည်တို့။ > > 2. အခြားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သင့်အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
1. ISO9001:2015၊ CCS၊ SGS ၊BV လက်မှတ်များ အောင်မြင်ပြီး၊
2. အချိန်နှင့်တပြေးညီ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေးပို့မှု၊ အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအား နှစ်စဉ်ရောင်းချမှုတွင် 30% တိုးလာစေရန် ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။
3.Pentated slewing bearing နှင့် slewing drive။
4. Factory -Audit လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်ပြီး SANY၊ SUNWARD၊ TEREX စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။>> 3၊ပေးပို့ချိန်ကို သင်မည်ကဲ့သို့အာမခံပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားရှိပြီး ပေးပို့ချိန်ကိုသေချာစေရန်အတွက် စံမော်ဒယ်များအတွက် ပစ္စည်းစတော့ရှယ်ယာထားရှိပါ။
စံမော်ဒယ်အတွက် 25-30 ရက်;
စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်အတွက် 45-55 ရက်။
ယခင်- အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက် ဂီယာသုံးတန်း Roller Slewing Bearing
နောက်တစ်ခု: ဆိုလာခြေရာခံစနစ်အတွက် 17" Slewing Drive
သေးငယ်သော Slewing Ring Bearing
Wanda တိကျမှုစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ Slewin...
အတန်းလိုက် ဘောလုံးတစ်လုံးကို သယ်ဆောင်သော အတွင်းခံသွားများ